Sida loo ilaaliyo gadhkaaga saddexda maalmood ah mid hagaagsan | Ragga Stylish
Sida loo ilaaliyo gadhkaaga saddexda maalmood ah mid hagaagsan
Lucas garcia | | La xiiray, nololeedka
Horey waad go aansatay, waxaadna rabtaa inaad sameyso a seddex maalmood garka eeg, laakiin wax baa kaa werweraya. Sideen ugu ilaalin karaa si qumman adigoon aad uxirneyn? Miyaan u baahanahay inaan gooyo maalin kasta?
Gadh saddex maalmood ah waxay u baahan tahay xoogaa daryeel iyo daryeel ah, waxaan baran doonnaa sida loo fuliyo si ay u ahaato mid kaamil ah iyada oo aan lacag badan lagaa qaadin ama waqti badan lagaa qaadin.
1 Sida loo ilaaliyo gadhkaaga saddexda maalmood ah mid hagaagsan
2 5ta lagama maarmaanka u ah daryeelka saddexda maalmood ee gadhka
Ugu horreyntii, ka hor intaadan korin gadhka saddex maalmood ah, waa inaad ka fikirtaa haddii qaabkaas gadhka ahi kugu habboon yahayMaxaad u dooneysaa inaad sameyso? Miyaad awoodi doontaa inaad sii haysato? Gadhka saddexda maalmood ah wuxuu ku habboon yahay dhammaan kuwa caajiska ah inay xiiraan maalin kasta, ama kuwa leh wejiga ilmaha oo rumaysan in gadhka saddexda maalmood ah uu siin karo muuqaal bislaanaya. Kuwani waa laba ikhtiyaar oo wanaagsan oo noocan ah xiirashada, laakiin haddii aadan awoodin inaad dayactirto, iska ilow.
Markaan go'aansanno inaan rabno gadh saddex maalmood ah, waa muhiim inaan tixgalino koritaanka dabiiciga ah ee timahaaga, haddii aad aragto inay lama huraan tahay in maalin kasta la jaro, ama haddii xiirashada caadada wuu sii weynaan doonaa. Mar alla markii aad xakameyso gadhkaaga, waxaa muhiim ah inaad taxaddarto gaar ahaan qaybta sare ee dhabannada iyo qaybta hoose ee qoorta, si timuhu aysan u weynaan aad u badan iyo qaabkiisaba, laakiin had iyo jeer aad siiso waxyaabo dabiici ah muuqaalka, Si kale haddii loo dhigo, ha ku dadaaleynin inaad gadhka u xoqdo si sax ah.
Waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid si aad uga saarto timahan xad-dhaafka ah, waa in la hubiyo in jelka xiirashada ee aad isticmaasho uusan xumbo bixinaynin intaad xiiraysid, oo kuu ogolaanaya inaad si cad u aragto waxa gadhkaaga ka hadhay.
5ta lagama maarmaanka u ah daryeelka saddexda maalmood ee gadhka
Suuxdinta. Waxaan si dheer uga hadalnay talaabadan aasaasiga ah, waana tan exfoliation Waa lagama maarmaan labadaba in la daryeelo maqaarka iyo in la nadiifiyo dahaarka garka. Sidan oo kale, waxaad ka soo saari doontaa unugyada maqaarka ee dhintay si marka loo xiirto boodboodka uu u fududaan lahaa.
Jeelka xiirista Sifeyn wanaagsan kadib, mari mariinka xiira aagga aad rabto inaad timaha ka saarto, kuna daa 30 ilbiriqsi si garku uu u noqdo mid gabi ahaanba jilicsan
Waa laga xiiray. Hadda waa waqtigii laga takhalusi lahaa gadhka. Si tartiib ah ugu xiir jihada koritaanka timaha. Ha ku degdegin, si taxaddar leh u samee si aadan timo badan kaaga saarin.
Ilaali dhererka gadhka. Aaway geestii? Muddo intee le'eg ayuu gadhka saddexda maalmood noqonayaa? Waa inaadan uga tagin wax aad u gaaban ama aad u dheer. Joogtee dherer kuu oggolaanaya inaad jarjartid oo aad daryeesho labadii maalmoodba mar, adigoon aad uga badin.
Iska ilaali aagga daanka. Dhammaan kuwa raadinaya gadhka gaagaaban, waxaa muhiim ah in la tixgeliyo timaha ka hooseeya daanka. Maaddaama aan ku dadaalayno inaan gadhku u ekaano mid dabiici ah, waxaa muhiim ah inaad si siman u xiirto. Markaad hoos usocoto hoostiisa qadka daanka, taxaddar illaa hoose illaa qoorta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » La xiiray » Sida loo ilaaliyo gadhkaaga saddexda maalmood ah mid hagaagsan
Sideese loo ilaaliyaa? Waan u xiisay: /
Dixir madow dijo
Jawaab u siiso Black Maggot
Xagaaga qowmiyadeed, xagaaga 'paisley' (I)
Jel ama xumbada xiirashada, midkee ayaa la dooranayaa?